नमुना नेपालको साटो किन क्रिकेट मैदान बनाउदैछन् धुर्मुस सुन्तली ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
नमुना नेपालको साटो किन क्रिकेट मैदान बनाउदैछन् धुर्मुस सुन्तली ?
२०७५ माघ १५ मंगलवार
हास्यव्यंग्यात्मक अभिनयबाट स्थापित भएका सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे २०७२ सालको भूकम्पपछि अभिनयकर्ममा मात्रै सिमित भएनन् । उनीहरु अभिनयबाट कमाएको ख्यातीलाई सदुपयोग गर्दै भूकम्प पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन अग्रसर भए । र, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन स्थापना गरेर मार्फत पहाडी जिल्ला काभ्रेको डाँडागाउँमा एकीकृत नमुना पहरी बस्ती, हिमाली जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौरमा एकीकृत नमुना बस्ती र तराई(मधेसको महोत्तरीको बर्दिबास १ मा एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माण उनीहरुले सफलतापुर्वक सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
नमुना नेपाल कि रंगशाला ?
माथि उल्लेखित तीन परियोजना सम्पन्न गरिसके पछि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन एक विशेष परियोजनाको तयारीमा थियो । फाउण्डेसनको वृहत परियोजना अन्तर्गत नमुना नेपाल निर्माणको तयारीमा उनीहरु जुटिरहेका थिए । अब विश्वले चिन्नेछ नेपाल, नेपाल भित्रको नेपाल नमुना नेपाल निर्माण परियोजनाको सर्भेको काम सकेर मास्ट प्लान, डि.पी.आर र ई.आई.ए.को प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका बेला धुर्मुस सुन्तलीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको पहल थाल्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा सल्लाह सुझाव आइरहेको थियो ।
नेपाली क्रिकेट टिमले एक पछि अर्को गर्दै पाइरहेको सफलताका कारण पनि क्रिकेट मैदान बनाउने पहल गर्न जनस्तरबाट दबाव भनौ वा अनुरोध दुवै आक्रामक रुपमा आइरहेको थियो उनीहरुलाई । दुवै परियोजना एकसाथ सुरु गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने दोधारकै बीच उनीहरुले अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने अभियान पहिला गर्ने कि नमुना नेपाल भनेर एक किशिमको सर्वेक्षणका रुपमा फेसबुकमा स्टाटस राखेका थिए । धेरैले उनीहरुलाई क्रिकेट मैदान बनाउन सुझाव दिए र सहयोगको प्रतिबद्धता समेत जनाए । सायद सहयोगी र प्रशंसकहरुबाट पाएको यही सुझावकै कारण हुनसक्छ धुर्मुस सुन्तली क्रिकेट मैदान बनाउने परियोजनालाई सुरुमा गर्ने निर्णयमा पुगे ।
बुधबार घोषणा हुँदै
नमुना नेपाल र क्रिकेट मैदान बनाउने परियोजना मध्ये क्रिकेट मैदान बनाउने परियोजनालाई सुरुमा गर्न लागेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बुधबार विशेष कार्यक्रमका साथ आफ्नो परियोजनाको औपचारिक घोषणा गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने घोषणा कार्यक्रममा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागी फाउण्डेसन र भरतपुर महानगरपालिका बीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत हुँदैछ ।
कसरी निर्माण हुँदैछ ?
सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण संयोजन गर्नेछ । रंगशाला निर्माणका लागि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण समिति बन्नेछ र त्यही समितिको रोहवरमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने छ ।